Inona no atao hoe safidy tokana, voamarina ary fidirana indroa? | Martech Zone
Inona no atao hoe safidy tokana, voamarina ary fidirana indroa?
Zoma, Septambra 9, 2016 Zoma, Septambra 9, 2016 Douglas Karr
Na inona na inona karazana fandefasan-kafatra marketing ataonao, mila manome fomba fiasa ianao ho an'ny mpamandrika hiditra ao amin'ireo hafatra ireo. Ny ankamaroan'ny firenena sy ny politikam-barotra dia mampihatra karazana fitsipika manohitra ny spam, noho izany dia zava-dehibe ny fandraketana ny loharano sy ny asan'ny fitondran-tena. Ireto misy fomba fiasa:
Safidy fidirana tokana - Ity no fomba mahazatra amin'ny alàlan'ny mailaka sy fandefasana hafatra an-tsoratra. Misoratra anarana amin'ny tranonkala ny mpamandrika na ampidirin'ny orinasa ao anaty sehatra fandefasan-kafatra. Ny tombony azo avy amin'ny opt-in tokana dia amin'ny fahatsorany, tsy mila fifandraisana fanampiny. Ny fahalavoan'ny opt-in tokana dia ny lasibatrao mety ho lasibatra ary ny adiresy fandrika spam no misoratra ho azy ao amin'ny lisitrao. Azonao atao ny mahita ny mailaka nosakananao teny an-dàlana. Ny mahatsara ny opt-in tokana dia ny mpampiasa matetika no misafidy famandrihana nefa tsy handray fepetra bebe kokoa amin'ny fomba fiasa mifehy indroa.
Opt-In tokana miaraka amin'ny fanamafisana - Ity dia fomba fanao tsara indrindra ho an'ny famandrihana hafatra opt-in saingy matetika no tsy raharahiana. Hafatra fandraisana tsara izay manamarina fa nifidy ny mpamandrika ary mametraka ny fanantenana amin'ny impiry handefasana hafatra sy ny lanja omen'izy ireo ny mpanjifa dia tetika lehibe.
Safidy miditra indroa - Ny sehatra fandefasan-kafatra rehetra dia maniry ny hampiasanao an'io fomba fiasa io satria mampihena ny mety ho fitarainan'ny spam. Ny mpisoratra anarana dia misafidy amin'ny alàlan'ny endrika, fanafarana na hafatra an-tsoratra. Arahina hafatra avy hatrany hanamafisana ny safidinao. Raha mailaka io dia mazàna izy ireo dia mila manindry rohy amin'ny mailaka. Raha mandefa hafatra an-tsoratra izy ireo dia tsy maintsy mamaly amin'ny fanamafisana fa misafidy izy ireo.
Misy ihany koa psikolojia mifandraika amin'ny opt-in roa:
Ny safidy opt-in dia miankina amin'ny fitsipiky ny famaliana, a lalàna fototra momba ny psikolojia ara-tsosialy izay milaza amin'ny toe-javatra ara-tsosialy maro dia averinay izay azontsika avy amin'ny hafa. Atombohy ny fifandraisana amin'ny fampisehoana aminao fa manaja ilay olona - sy ny adiresy mailaka omen'izy ireo anao - ary manangana ny tenanao ianao hiverenana amin'ny valiny sy ny tahan'ny misokatra.
Ity infographic avy amin'ny Salesforce, Ahoana no ahafahan'ny psikolojia manamboatra mailaka misimisy kokoa, mandehandeha isaky ny karazana opt-in ary mifanakalo hevitra momba ny personalization ny mailaka niainanao mba hampitomboana ny fandraisana andraikitra sy hampihenana ny fisoratana anarana sy ny tatitra SPAM Izy io koa dia miady amin'ny personalization ary manatsara ny tsipika momba ny lohahevitra hampitomboana ny firosoana.
Tags: nisafidy opt-indouble opt-inopt-in tokanainona ny hafatra fanamafisanainona no atao hoe opt-in indroainona ny opt-in tokana
Fivarotana fanompoana tena na vidiny miorina amin'ny soatoavina - Mbola momba ny traikefa ihany io